ဒီနေ့အတွက် သင်ဘာတွေအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးပြီလဲ? – Trend.com.mm
Posted on October 9, 2018 by Noel
မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေချာတဲ့လူ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်အတွက်၊နောင်အနာဂတ်အတွက်တွေ ကြိုတင်စီမံကိန်းချပြီးဆွေးနွေးနေတာတွေရပ်လိုက်ပါဦး။ဒီနေ့တစ်နေ့တာအတွက်ရော အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးပြီလား အရင်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
ဒီနေ့ဘယ်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်အောင်လုပ်မိခဲ့လဲ? ဘယ်သူ့ကို စေတနာနဲ့လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ? မိဘတွေအပေါ်မှာရော ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံမိခဲ့ရဲ့လား?ကိုယ့်မိဘအတွက် ဘာကောင်းတာတွေလုပ်ပေးပြီးပြီလဲ?မောင်နှမဆွေမျိုးတွေအပေါ်မှာရော နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံခဲ့ရဲ့လား?ဘယ်သူ့ကို ကူညီပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ? လက်ရှိအလုပ်အတွက်ရော အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့ရဲ့လား? စသဖြင့်ပေါ့။
ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့တာလေးအကျိုးရှိအောင်လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။မနက်ခင်းနိုးလာပြီဆိုရင် စိတ်လေးရှင်းရှင်းထား။ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ စိတ်မခုနဲ့၊ဒေါသမထွက်နဲ့၊အရာရာကိုအကောင်းမြင်ပြီး တစ်ခြားသူအပေါ်စေတနာအပြည့်နဲ့ဆက်ဆံပြုမူပါ။ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ဆိုးစိတ်ခုအောင်ပြောထားဆိုထားသူတွေအပေါ်လည်းနာကျည်းမနေပဲ ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။ဒီအပူတွေကိုသံသရာထိမယူသွားပါနဲ့။
တောင်းပန်ရမယ့်လူကိုတောင်းပန်၊ခွင့်လွှတ်ရမယ့်လူကိုခွင့်လွှတ်ပါ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမုန်းပွားနေတာတွေရပ်ပြီး အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတန်ဖိုးထားပါ။နောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုရပ်လို့ ဒီနေ့တစ်နေ့တာအတွက်ပဲ အကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားပါ။
အိပ်မက်တွေ၊အနာဂတ်တွေ၊ပန်းတိုင်တွေအသာထားလို့ ဒီနေ့တစ်နေ့တာရဲ့ပန်းတိုင်ကိုသာ အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတာသိစေပါ။အချိန်လွန်မှ ဘာမှပြောလို့မရပါဘူးနော်။ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ကိုယ်ဒီနေ့အတွက် နောင်တရစရာမရှိအောင် လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလားစဉ်းစားပါ။စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီး ပူပင်သောကတွေနဲ့အိပ်ရာမ၀င်ပါနဲ့။မျက်စိတစ်မှိတ်ဆိုတဲ့အချိန်အတွင်း ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တာမို့လို့ လက်ရှိအချိန်လေးကို တန်ဖိုးထားပြီးအကောင်းဆုံးနဲ့အကျိုးရှိရှိဖြတ်သန်းကြပါလို့တိုက်တွန်းအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကို ပန်းချီကားတစ်ချပ်လိုလှပအောင်ခြယ်မှုန်းပါ။နောက်ဆံတင်းစရာမရှိအောင် ဖန်တီးပါ။
မနကျဖွနျဆိုတာ မသခြောတဲ့လူ့ဘဝကိုပိုငျဆိုငျထားတာပါ။ဒါကွောငျ့ မနကျဖွနျအတှကျ၊နောငျအနာဂတျအတှကျတှေ ကွိုတငျစီမံကိနျးခပြွီးဆှေးနှေးနတောတှရေပျလိုကျပါဦး။ဒီနတေ့ဈနတေ့ာအတှကျရော အကောငျးဆုံးလုပျပွီးပွီလား အရငျဆနျးစဈကွညျ့ပါ။
ဒီနဘေ့ယျသူ့ကိုစိတျဆိုးဒေါသထှကျအောငျလုပျမိခဲ့လဲ? ဘယျသူ့ကို စတေနာနဲ့လမျးပွပေးခဲ့ပွီးပွီလဲ? မိဘတှအေပျေါမှာရော ကောငျးကောငျးမှနျမှနျဆကျဆံမိခဲ့ရဲ့လား?ကိုယျ့မိဘအတှကျ ဘာကောငျးတာတှလေုပျပေးပွီးပွီလဲ?မောငျနှမဆှမြေိုးတှအေပျေါမှာရော နှေးနှေးထှေးထှေးဆကျဆံခဲ့ရဲ့လား?ဘယျသူ့ကို ကူညီပေးခဲ့ပွီးပွီလဲ? လကျရှိအလုပျအတှကျရော အကောငျးဆုံးလုပျပေးခဲ့ရဲ့လား? စသဖွငျ့ပေါ့။
ကိုယျ့ရဲ့ဒီနတေ့ဈနတေ့ာလေးအကြိုးရှိအောငျလုပျဖို့မမပေ့ါနဲ့။မနကျခငျးနိုးလာပွီဆိုရငျ စိတျလေးရှငျးရှငျးထား။ဘယျသူ့အပျေါမှာမှ စိတျမခုနဲ့၊ဒေါသမထှကျနဲ့၊အရာရာကိုအကောငျးမွငျပွီး တဈခွားသူအပျေါစတေနာအပွညျ့နဲ့ဆကျဆံပွုမူပါ။ကိုယျ့အပျေါစိတျဆိုးစိတျခုအောငျပွောထားဆိုထားသူတှအေပျေါလညျးနာကညျြးမနပေဲ ခှငျ့လှတျပေးလိုကျပါ။ဒီအပူတှကေိုသံသရာထိမယူသှားပါနဲ့။
တောငျးပနျရမယျ့လူကိုတောငျးပနျ၊ခှငျ့လှတျရမယျ့လူကိုခှငျ့လှတျပါ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျအမုနျးပှားနတောတှရေပျပွီး အနားမှာရှိတဲ့သူတှကေိုတနျဖိုးထားပါ။နောကျမှလုပျမယျဆိုတဲ့အတှေးတှကေိုရပျလို့ ဒီနတေ့ဈနတေ့ာအတှကျပဲ အကောငျးဆုံးဘယျလိုလုပျရမလဲစဉျးစားပါ။
အိပျမကျတှေ၊အနာဂတျတှေ၊ပနျးတိုငျတှအေသာထားလို့ ဒီနတေ့ဈနတေ့ာရဲ့ပနျးတိုငျကိုသာ အကောငျးဆုံးဖွတျသနျးနိုငျဖို့ကွိုးစားပါ။ကိုယျခဈြရတဲ့သူတှကေိုလညျးခဈြတယျဆိုတာသိစပေါ။အခြိနျလှနျမှ ဘာမှပွောလို့မရပါဘူးနျော။ညအိပျရာဝငျခါနီးမှာ ကိုယျဒီနအေ့တှကျ နောငျတရစရာမရှိအောငျ လုပျခဲ့ပွီးပွီလားစဉျးစားပါ။စိတျဆိုးဒေါသထှကျပွီး အိပျရာမဝငျပါနဲ့။မကျြစိတဈမှိတျဆိုတဲ့အခြိနျအတှငျး ဘာမဆိုဖွဈသှားနိုငျတာမို့လို့ လကျရှိအခြိနျလေးကို တနျဖိုးထားပွီးအကောငျးဆုံးနဲ့အကြိုးရှိရှိဖွတျသနျးကွပါလို့တိုကျတှနျးအကွံပွုလိုကျပါတယျ။
ကိုယျ့ရဲ့နရေ့ကျတိုငျးကို ပနျးခြီကားတဈခပျြလိုလှပအောငျခွယျမှုနျးပါ။နောကျဆံတငျးစရာမရှိအောငျ ဖနျတီးပါ။